Kuboshwe abafundi ngelokushisa isikole | Isolezwe
Kuboshwe abafundi ngelokushisa isikole
Izindaba / 14 September 2017, 09:50am / NONTUTHUKO NGUBANE
KUGQAMUKE amalangabi kushiswa isikole saseSokheni High ngaseKranskop
Kumiswe ukufunda kulesi sikole ngemuva kokushiswa kwamakilasi amabili, ihhovisi likathishanhloko nehhovisi lothisha
ZIBAKHALELE abafundi abayisishiyagalolunye baseSokheni High, eMakhabeleni ngaphandle kwaseKranskop abasolwa ngokungqongqisa ngomlilo isikole ngoba befuna ngodli amagumbi amasha okufundela, ukudla kwasekuseni nebhasi elizobathutha.
Kumiswe ukufunda kulesi sikole ngemuva kokushiswa kwamakilasi amabili, ihhovisi likathishanhloko nehhovisi lothisha.
Isikole kuthiwa sishiswe emini kabha ngoMsombuluko ngesikhathi abaholi besikole nesigungu sabazali besemhlanganweni njengoba uthuthuva belusuke ngeledlule.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lt Colonel Thulani Zwane uthe abasolwa bazovela enkantolo maduze.
“Amaphoyisa aseKranskop abophe abafundi abayisishiyagalolunye ngamacala okushisa nelokweba impahla ethathwe ngesikhathi kushiswa,” kusho uZwane.
Usihlalo wesigungu sabazali, uMnuz Mihlayakhe Dlomo izolo utshele Isolezwe ukuthi abahambisani nabafundi abashise isikole.
Uthe bathole ukuthi abafundi bacasulwe ukuthi abafundi abathize bathole umbiko wezimali obuhlongozwa ngo-2016, babona kubhalwe imali eningi nezinto obekuhlelwe ukuthi zenziwe. Bazitshela ukuthi imali ikhona ekubeni bengenayo ibhasi nesikole singalungisiwe, abanye befuna ukudla ekuseni kakhulu ekubheni umbandela womnyango uthi kudliwa ngo-10.
Abafundi bangaphezu kuka-400 kulesi sikole kanti abaningi bahamba ibanga elingu-15km kuya ku-20km ngezinyawo uma beya esikoleni.
Ziyisikhombisa izikole eziseduze zamabanga aphansi eziphakela abafundi lesi sikole.
UDlomo uthe okubakhathaza kakhulu ukungafundi kwabafundi njengoba bekumele kubhalwe izivivinyo zikaSepthemba kulungiselelwe ezokuphela konyaka.
Umfundi walesi sikole okhulume neSolezwe kodwa wacela ukungadalulwa uthe badumele ngesenzo esenziwe ozakwabo ngoba bona bafuna ukufunda. Uthe yize bekhathazekile indlela isikole sabo esiyiyona nezinye izikhalo kodwa ukusishisa akusona isixazululo.
Phakathi kwezinto ezilinyaziwe nezithathwe kulesi sikole kubalwa iprinta, idata projector, ama-tablets angu-26 kwatholwa ayisithupha, umshini wokugunda utshani, amafayela esikole, thelevishini ne-DVD. Ama-laptop amathathu athathiwe kodwa atholwa amaphoyisa.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo eKZN uMnuz Kwazi Mthethwa uthe: “UMnyango uyakugxeka okwenziwe abafundi ngoba imali ebibekelwe ezinye izinto sekuzomele ilungise umonakalo. Lokhu kusibuyisela emuva nezinhlelo ebesinazo,” kusho uMthethwa.
Kulindeleke ukuthi kube nomhlangano kulesi sikole kusasa.